MinerOS GNU / Linux: Sistemụ arụmọrụ maka Ngwuputa Ngwuputa (MilagrOS) | Site na Linux
Linux Post Wụnye | | Nkesa, GNU / Linux
Ekele, ndị otu na ndị ọbịa nke nnukwu Blog a zuru oke nke iru mba ụwa na sọftụwia efu na GNU / Linux. Ka ọtụtụ ọnwa gachara n’enweghi ederede otu a, taa, ewetere m gị akwụkwọ banyere mmepe ohuru m na Free Software World, nke jikọtara ihe niile m mụtara ruo ugbu a. GNU / Linux, Intanet (Webapps) na Ngwuputa Cryptocurrency Digital:
0.1 Ndị na-egwupụta GNU / Linux: Sistemụ Njikere 100% Jikere maka Ngwuputa Cryptocurrency Digital
1 Gịnị bụ MinerOS GNU / Linux?
1.1 Ọdịdị nkwụsi ike n'ọdịnihu
1.1.1 Ozi dị mkpa emelitere na 11/07/2018
1.2 MilagrOS - Ntughari ohuru
1.2.1 Ozi dị mkpa emelitere na 30/07/2021
Ndị na-egwupụta GNU / Linux: Sistemụ Njikere 100% Jikere maka Ngwuputa Cryptocurrency Digital
Gịnị bụ MinerOS GNU / Linux?
Ọ bụ GNU / Linux Distro, nke dị ugbu a na-emepe ma dị maka nbudata na beta version (0.2) na onyinye gara aga (onyinye maka ọrụ ahụ) na ụdị ya beta 0.3.
Otú ọ dị, ọ na-atụ anya na mbụ anụ version, ya bụ, na Xdị 1.0 (Petro) nke Ndị na-egwupụta GNU / Linux enwere ike iji ya Ojiji ojiji kwa ụbọchị, ebe ọ na-eweta ihe niile Basic na Mkpa Software maka Home na Office, na nhazi nke dabere na Ubuntu 18.04 (Oge a na nnukwu ndakọrịta) na MX Linux 17 dabere na DEBIAN (Stability, Portability and high Customization) na njikọta nke XFCE Environment (Light and Functional) + Plasma (Mara mma ma Dị Ike), ya mere ọ na-agbanwe n'ụzọ zuru oke na PC ọ bụla (Personal Computer) nke obere ọkara ma ọ bụ arụmọrụ dị elu na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọdịdị nkwụsi ike n'ọdịnihu
La Xdị 1.0 de Ndị na-egwupụta GNU / Linux ga-abịa dabere na Ubuntu 18.04 ọ ga-arọ 1 GB gbakwunyere (4.3 GB) na Xdị 0.3 n'ihi na Ọnọdụ Plasma nkeonwe nwere ngwa ndị ọzọ, ma ọ ga-eri obere ebe nchekwa RAM, ihe dịka 400MB veso 640MB nke Version 0.3. Buru akpụkpọ ụkwụ zuru ezu iji banye njikwa njikwa (lightdm) na nkezi na 30 sekọnd ma mechie kpamkpam na sekọnd 10. Na 5 Digital Mining Software na 6 Wallets arụnyere.
Nke Distro MinerOS GNU / Linux Version Ọ na-atụ anya na-ulo oru si Ọnwa Nke Anọ 19, 2.018, ma ọ bụ mgbe akwụkwọ nchịkwa nke Ubuntu 18.04. MinerOS GNU / Linux 1.0 ga-eweta mmemme ngwuputa ihe Minergate, CGMiner, CPUMiner, Claymore na XMR-STAK-CPU, gbakwunyere ngwa agha, Ọpụpụ, Jaxx, obere akpa Magi, na ngwa nchọpụta ngwa Trezor Hardware Wallet arụnyere na ndabara.
Na nkenke, MinerOS GNU / Linux bụ a Sistemụ arụmọrụ "Ndị na-abụghị ndị isi" na "100%" dị njikere iji n'ụlọ, Office na / ma ọ bụ Cryptocurrency Mining. Na-adị mfe ịgbanwere n'ime Linux Gamer dakọtara na proprietary Microsoft ngwa site na ịwụnye PlayOnLinux na Steam.
Ozi dị mkpa emelitere na 11/07/2018
A tọhapụrụ ya Erdị MinerOS 1.1 ma ekpebiela iji mezue mmepe ya kpamkpam. Yabụ na nso nso, ihe niile emepụtara na ya ga-akwaga na Distro ọhụụ akpọrọ MilagrOS.
MilagrOS - Ntughari ohuru
Ozi dị mkpa emelitere na 30/07/2021
Kemgbe Julaị 2.019, na ochie Distro MinerOS dabere na Ubuntu 18.04, enwebeghị emelitere, agbanyeghị, mmepe ya niile ka akwagara na ọhụrụ Distro MilagrOS, dabere na MXLinux 19.X, nke na-adabere na ya DEBIAN 10.X, n'ihi ya, ịmụtakwu banyere nke a Mwepụ adabara Ngwuputa Dijitalụ, ha kwesịrị naanị gaa na webụsaịtị gọọmentị nke otu n'ime Tic Tac Project | Distros.
"Ọrụ ebube GNU / Linux, bụ mbipụta na-akwadoghị (Respin) nke MX-Linux Distro. Nke na-abịa na oke ịhazi na njikarịcha, nke na-eme ka ọ dị mma maka obere akụ ma ọ bụ kọmputa ochie, yana maka ndị ọrụ na-enweghị ikike Internetntanetị na oke na ihe ọmụma nke GNU / Linux. Ozugbo enwetara (ebudatara) ma wụnye ya, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma na-enweghị mkpa ịntanetị, ebe ọ bụ na etinyegoro ihe niile ịchọrọ na ihe ndị ọzọ.".
Ị nwekwara ike ịhụ ozi ndị ọhụrụ na webụsaịtị anyị n'ime ndị a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » MinerOS GNU / Linux: Sistemụ arụmọrụ maka Ngwuputa Ngwuputa (MilagrOS)
Ihe 70 kwuru, hapụ nke gị
hey! ezi post 🙂.
Zaghachi na MANUEL ARTURO SILVA ROCHA
Daalụ! Etinyewo m ihe ọmụma m niile na Distro!
Hi Jose, ụtụtụ ọma
Aghọtara m na ọ bụ distro ọhụrụ na ajụjụ m bụ: Ndi distro ọhụrụ a na-akwado ntinye nke mmemme dị ka postgres, docker, postman, mysql, wdg na enweghị nsogbu ma ọ bụ naanị maka mmemme ụlọ (ụlọ ọrụ n'efu)?
Enweghị aha, n'ezie. Na-akwado usoro ihe omume GNU / Linux niile!
igbe ojii dijo
"Aha aha nke Distro MinerOS GNU / Linux Version 1.0 ga-abụ" Petro "na nsọpụrụ nke mbụ Official Cryptocurrency ma ọ bụ Cryptoactive nke Bolivarian Republic of Venezuela." Ọ dị oke njọ, ị gụnyere iwu (na ọ bụghị nke kacha mma) na Linux os.
Zaghachi na igwe ojii
Ọ bụ n'ezie ihe nwute na ị hụrụ aha ahụ dị ka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị! 1.2dị 0.3 ga-akpọ Onixcoin, a ga-akpọ 1 Bolivarcoin ma a ga-akpọ ndị na-esonụ dị ka ọdịnihu nke Onwe Onye Ọchịchị ma ọ bụ nke Ọchịchị nke National Private Sector ma ọ bụ State Venezuelan (Gọọmenti) kere, onye ọ bụla bụ otu ma ọ bụ nkuzi nke na-enye ya iwu! Ya mere, akpọghị ya Petro maka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, a na-akpọ ya Petro maka ihe ezi uche na ahịa! Ọ bụrụ na Capriles, Machado, Mendoza ma ọ bụ onye ọzọ nke Mmegide nke Mba na-adọta Crypto, mgbe ahụ n'ezie ụfọdụ n'ime XNUMX.X n'ọdịnihu ga-akpọ ya. Abụghị m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, abụ m onye na-ahụ maka nkà na ụzụ!
Maazị Technologist na-achọghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị:
Ihe ọ bụla nwere akara "Venezuela" abụghị ntụkwasị obi, ọ bụghị cryptocurrency, ọ bụghị nkesa Linux. Knowswa maara ihe na-eme na Venezuela.
Ma n'ụzọ ... ọzọ nkesa Linux ọzọ ... nke na-enye otu ihe ị nwere ike ịnweta na nkesa Linux gị na iwu ole na ole na njikwa. Okwu.
Anaghị m azụta. Daalụ.
O nwere ihe ọ bụla hoax ga-enwe.
Mmasị na ịkwanyere ùgwù! Ka anyị hụ ma m ghọtara: Ọ dịghị ihe ọ bụla metụtara Venezuela ma ọ bụ mee na Venezuela bụ ntụkwasị obi? Ka anyị kwuo, n'echiche a jụrụ, na nke a bụ eziokwu na enweghị ike ịgbanwe agbanwe, yabụ na ị ziri ezi. Mana site n'inwe ya, ị na-agọnahụ onwe gị dị ka onye na-eche echiche, mepụtara, ebe ọ bụ na ị bụ, ma ọ bụ jiri ọmarịcha Blog Blog a mara mma na Venezuelan. Ma dị ka m maara, ndị Venezuelan (Ndị niile: Ndị isi na ndị mmegide, ndị na-elekọta mmadụ na ndị isi ike, ndị ziri ezi na ndị aka ekpe) bụ otu, ezi na njọ, dịka ndị ọzọ. Agbanyeghị, mgbe ị na webata anyị na-ekwu okwu. Ekele ma lekọta ụtọ ...
Otu puku mgbaghara maka okwu m gara aga. Ana m ewepu ihe niile m kwuru na ihere.
Venezuela bụ ndị mara mma, na obodo mara mma, ọ na-apụtakarị mgbe niile maka ịchọrọ ịkwalite onwe ya, ọbụlagodi, n'echiche m dị umeala, gọọmentị ya esoghị ya.
M na-echeta na m ledara ọrụ ya anya. Amaara m nke ọma na ọ ga-abụrịrị na ọ nọrọ ọtụtụ awa na ya, oge bụkwa ihe kacha baa uru anyị nwere.
Mgbe ụfọdụ, n’ụbọchị ọjọọ, a na-emehie ihe, dị ka okwu nlelị m. Ana m arịọ mgbaghara gị ma kelee gị maka inwe ọmịiko na ọnọdụ mmalite evolushọn m dara ogbenye.
Enwere m ekele maka onyinye gị na mpaghara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
A nabatara mgbaghara gị, ka ị sọpụrụ sọftụwia na-adị ndụ ogologo oge!
Ndewo José, ụtụtụ ọma. Nzube m abụghị ka m mepụta taya. Ewezuga na aha ị họọrọ maka ihe ọ bụla ị mepụtara ma ọ bụ mepụta na-eme ka ụda olu, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ. Amaghị m ihe banyere Linux nke sitere na Linux na-ezo aka na mba ma ọ bụ ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọbụna Nova OS, distro e mepụtara na Cuba na nke oge a adabaghị na ụwa nke OS, ma ọ bụ Canaima, nke na-ezo aka n'ihe nketa ebumpụta ụwa na Venezuela. Ọ bụ naanị njirisi onwe m. Ah, abughi m onye ndoro ndoro ochichi ma obu ezie na abughi m onye mmeputa, abum onye oru teknụzụ.
Aha ndị bụ isi nke Distro MinerOS ga-ezo aka na steeti ọ bụla ma ọ bụ nke nzuzo nke Venezuelan, n'ihi na ọ bụ Venezuelan Distro lekwasịrị anya na Ngwuputa Dijitalụ, nke e kere na Venezuela! Ahụghị m ihe ọ bụla gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyere nke ahụ, mana m na-asọpụrụ echiche gị, nke nwere ezi uche ma ọ bụrụ na ọrụ si mba na-adaba na mpaghara gị gosipụtara.
Igwe ojii, anaghị m ahụ ihe echere maka "ndọrọ ndọrọ ọchịchị" banyere ịkpọ aha aha distro.
Ezigbo oke, ekwenyeghị m na onye ọchịchị aka ike Venezuelan Maduro kwesịrị nsọpụrụ a.
Blerịba ngo! M ga-ebudata distro iji nwalee ya. A ga-akwado oru ngo ahụ n'ọdịnihu n'ọdịnihu n'elu ikpo okwu dị ka Github?
Ugbu a na Blog dị 0.2 kpamkpam nnwere onwe yana 0.3 nweta mgbe ị nyechara ọrụ okike!
Ọ dị ka ihe na-adọrọ mmasị. M ga-ege ntị mgbe ha na-ebipụta ya
Daalụ maka ihuenyo na nyocha
Zaghachi Alejandro TorMar
Ntughari a ga-elekwasị anya na Ngwuputa Bitcoin ma ọ bụ ihe mkpuchi ọ bụla? Daalụ n'ọdịnihu, ọ dị oke mma
Ihe mkpuchi ọ bụla a na-enweta na GNU / Linux Distro ọ bụrụhaala na ọ ga-ekwe omume ịchịkọta ya na Ubuntu / DEBIAN nke Distros.
Winlọ Darwin dijo
Ezigbo José si Cry & to CA Corporation, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịmalite mmalite na Blockchain na Cryptoactive edebanyere aha na Venezuela, anyị ga-achọ ịkpọtụrụ gị iji kwurịta ụzọ iji kwado mmepe nke MinerOS. Biko kpọtụrụ anyị site na email corpocrypto@gmail.com. Ekele na ihe ịga nke ọma.
Zaghachi Darwin Cabin
Ihe ọ bụla email m bụ: albertccs1976@gmail.com
Enyi m kpọrọ m ọtụtụ, ọrụ gị, enwekwara m mmasị na ya, m ga-achọ ịmatakwu banyere ya, ị ga-enwe ọwa telegran ebe m nwere ike ịjụ gị ọtụtụ ajụjụ gbasara ọrụ a? daalụ n'ọdịnihu .. na elu VENEZUELA! eleghara ihe nzuzu na-ekwu maka obodo anyị mara mma .. ekele
Ọ dị ezigbo mma. Mgbe m nwere ike m na-agbalị ya.
Ọ bụ ihe obi ụtọ na ọ bụ ụlọ ọrụ Venezuelan (ọ bụ naanị ihe ga-eme ka Venezuela si n'ala pụta, na-echeghị ndị mesaịa).
Ihe "Petro" bụ naanị aha koodu, dịka m maara na ọ bụghị nke onye ọ bụla nwere ike ịnweta. Ha ekwesịghị ime mkparị banyere ya ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ejiri aha nzuzo aha.
Dịka ị kpọrọ aha ngwanrọ ngwanrọ gụnyere, ị nwekwara ike ịza ajụjụ banyere ụdị cryptocurrencies nwere ike ịnweta site na ebe ahụ, nke ahụ nwere ike ịbụ "ọhụụ" maka ọtụtụ mmadụ.
Naanị m na-agbakwunye na afọ nke ụbọchị enweghị nkewa nke puku.
PS: Echere m na Bolivarcoin bụ egwuregwu, ọ bụghị ezigbo ihe.
Daalụ maka ile ụbọchị ahụ! Na Ndị na-abụghị steeti sitere na Cryptocurrency Community a na-akpọ Bolivarcoin tọchara Onixcoin.
Ikwu: Daalụ maka post. Ihe kacha masị m bụ "njikọta nke XFCE + Plasma gburugburu". Amaghị m na enwere ike ịgwakọta gburugburu ebe ndị a.
Distro m gara aga, nke anaghị ejupụta, akpọrọ XenOS biara na gburugburu niile arụnyere ma kwụsie ike, ọ dabere na ule DEBIAN. Ma ọ bụghị ama ebe ọ bụ na ọ jisie ike ime ka nrụnye ya kwụsie ike site na Systemback, mana na LiveCD ọ dị ebube, ọ bịara na Virtualbox etinyelarị ya.
Ekele m Albert, onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nke blọọgụ gị Project tic tac, yana nke ọrụ gị otu mgbe m jụrụ gị na ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ akwụkwọ nkuzi ngwanrọ n'efu na m ga-achọ ka ọ dị otu a, ma eleghị anya n'ọdịnihu ị nwere ike ịnwe ụdị ọrụ a ga-adịrịkwu mfe maka Ndị anyị bụ ndị ga-achọ ịnata klaasị linux ma ị gaghị akwụ ụgwọ maka klaasị onwe, gbasara ezigbo ụzọ cryptocurrency.
Anaghị m akụzi ụlọ akwụkwọ ọ bụla, ọ dị nwute. Naanị maka ugbu a, m na-enye ndị ọrụ aka m na ọrụ aka, yana ndụmọdụ sitere n'ụlọ na Free Software na Crypto-commerce. Esi m Caracas, Venezuela dika imara!
Ezi ehihie engineer,
Ebe ọ bụ na n'isiokwu gị ị na-ekwu na otu n'ime nsụgharị ya bụ n'efu na n'efu, m ga-achọ ịma ebe m nwere ike ịchọta koodu isi nke nkesa, ebe ọ bụ na m ga-achọ nyochaa ụdị na nkesa nke nhazi ahụ tupu ịwụnye usoro ahụ, anaghị m enwe obi abụọ. okwu ya mana echere m na ọ dị oke mkpa ịnwe ike ịnweta ozi a n'ihe gbasara nkesa n'efu (GPL) yana nke nwere sọftụwia nke a gha edozi nke ọma iji zere nkwụsị ma ọ bụ akwa mmiri na-atụghị anya ya.
Koodu isi mmalite ahụ bụ otu ISO, ya bụ, mgbe ị na-ebudata ISO ị nwere ike mepee ya wee dezie faịlụ nhazi ya ọ bụla. Ma ọ bụ na DVD / USB Live usoro, gbaa ya ọsọ ma nyefee ya na nyocha okporo ụzọ na nlekota iji hụ ma ọ nwere ma ọ bụ mee ụdị okporo ụzọ ọ bụla nke onye ọrụ na-akwadoghị. Koodu isi mmalite nke ọnụọgụ abụọ, dịka ha bụ otu sitere na Ubuntu 18.04 na MX Linux 17 Distros, ebe ọ bụ na ejikọtara 2 iji nweta MinerOS Distro. M na-agwa gị ka ị budata 0.2 ka ị wee nwalee ya ma kwuo!
Nsogbu bụ na Uruguay ọkụ na-arị elu kwa afọ
Daalụ! Ọfọn, isi ihe mgbochi na ngwupụta bụ ike oriri, nke mere na ihe dị fechaa na obere usoro oriri Distro belata ụfọdụ ike oriri nke akụrụngwa raara nye ọrụ a.
N'ịbụ Ubuntu 18.04, echere m na ọ na-akwado ya, ebe ọ bụ na Ubuntu kachasị dakọtara na nke oge a na Windows dị na ọkwa GNU / Linux.
Ekele m. Ezigbo mma distro!. Ahụrụ m na ị nwere AnyDesk etinyeworị ya na ụfọdụ nhazi. Ajuju m bu ma mbipute 0.2 ma ọ bụ 0.3 ga-enwe ike kwalite ya na 1.0 ozugbo ewepụtara ya? Cheer…
MinerOS, dị ka Distro MX Linux 17 (Distro Mother) site na nwa afọ installer MX Wụnye na-akwado emelite Distro na nsụgharị ndị ọzọ, agbanyeghị, na nke a, ọ gaghị enwe ike kwalite site na 0.3 ruo 1.0 ebe ọ bụ Distro ọzọ. Nne (Ubuntu) gbanwere site na 17.04 maka mbipute 0.3 na 18.04 maka mbipute 1.0. Yabụ, ọ na-akwadoro ịwụnye ụdị nke MinerOS 1.0 site na ncha.
Ugbu a onye ọ bụla nyere onyinye a kapịrị ọnụ iji nweta nsụgharị 0.3 ga-enweta njikọ nbudata maka nsụgharị 1.0 kpamkpam. Ma onye ọ bụla nyere ego achọrọ maka 1.0 ga-enweta ego achọrọ maka nsụgharị 1.1 na 1.2 kpamkpam n'efu.
Mara: Ọ bụghị ịkwụ ụgwọ, ọ bụ onyinye maka mmepe nke GNU / Linux Distro ọhụrụ a nke werela ọtụtụ awa / ọrụ iji wuo n'ụzọ zuru oke maka ọdịmma mmadụ niile!
Ọ na-abịarute na nke kachasị adaba ma gosipụta oge iji melite Ngwuputa n'ụlọ akwụkwọ na mahadum. N'ịbụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma dịkwa mfe inye ike.
Dịka onye otu na onye nkuzi mahadum ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ
Daalụ maka onyinye gị Jose Albert, Ekele.
Zaghachi Walter Silveira
Daalụ nke ukwuu maka ezi ọchịchọ gị! N’oge na-adịghị anya enwere m olile anya ịhapụ ụdị 0.3 nke MinerOS GNU / Linux n'efu, nke bụ nke ikpeazụ dabere na Ubuntu 17.04. Na inwe ụdị 1.0 dabere na Ubuntu 18.04 dị njikere maka nbudata mgbe enyere onyinye. Esemokwu dị iche n'etiti 2 bụ ụdị Ubuntu nke na-eje ozi dị ka ndabere, obere oriri RAM, yana ntinye Wallets. Site n'ụzọ, ugbu a, m gụnyere obere akpa Arepacoin, ma melite Webapps (Ndenye ibe edokọbara) na Nchọgharị. Ọ bụrụ na mgbe 20Feb na tupu 20Mar enweghị akụkọ banyere Petro Mining Software, m ga-etinye naanị Wallet n'ịntanetị ma ọ bụ site na Software ha malitere ma m ga-etinye Version 1.0 na ntanetị maka Eprel. Banyere ojiji ya na Mahadum na kọleji, ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ ga-eje ozi maka Federated Node ma ọ bụ maka ndị ahụ ma ọ bụ ndị ọrụ iwu, ndị chọrọ ịbanye na Ngwuputa Ngwuputa na-enweghị ọtụtụ ihe ọmụma n'ihi na Distro a dị mma n'ihi na ejirila ya Nhazi (DVD / USB) dị ndụ (Live) ma ọ bụ arụnyere, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị njikere iji n'adịghị ka Distro ọ bụla gụnyere Ubuntu, nke a ga-arụnyere ma hazie site na ncha, nke na-azọpụta oge / ọrụ ma belata usoro mmụta ahụ. maka uru! Ọfọn, agbanyeghị, enwere m olileanya na onye ọ bụla nwere obi ụtọ ma nye ihe ha nwere ike iji nwee ike ịga n'ihu na-aga n'ihu na mmepe ya, nke nta nke nta!
Nnukwu, ana m akọwa na amaghị m na weebụsaịtị a m na-agbaso kemgbe ọtụtụ afọ site na agụ google, bụ Venezuelan, ana m ekele gị ma kelee gị maka web, ogologo ndụ linux na ihe ọ bụla na-eme ka ike gwụ usoro a na njikwa ego, gọọmentị narco agha
Zaghachi na pablojet
Daalụ maka ịgbaso DesdeLinux!
Joel canes dijo
Ndeewonu! Ọ bụ nnukwu onyinye nye ụwa nke Sọftụwia Na - akwụghị ụgwọ na akụ na ụba agbachitere. Enwere m olile anya na Monero nwere ike ibute ihe banyere nkesa, Ekele!
Zaghachi Joel Cañas
Ma ọ bụrụ na ọ bụghị na e kwesịghị inwe nsogbu na na! Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke Distro a ma ọ bụ ọzọ ga-abụ itinye ha na Gamer Consoles (ya na kernel ha kachasị mma) ka ọ bụrụ na ị na-eji ihe niile dị njikere (arụnyere / chịkọtara) ka m si, dịka ọmụmaatụ, PS3 / PS4 ma ọ bụ Nintendo Switch. dị ka m hụrụ taa na vidiyo nke ụfọdụ ndị na-agba ọsọ na-ezukọta GNU / Linux na Plasma na Nintendo Switch.
21-Feb-18: A na-etinye Cpuminer-Opt Mining Software na obere akpa NEM na ụdị n'ọdịnihu 1.0. Webapps (Web Ibe edokwubara) emelitere, ma tinye ozi emelitere na Petro. A gbanwere ntọala (ngwa) nke sistemụ arụmọrụ nke dabere na Ubuntu 18.04 (Bionic) ruo 21/02/18.
02-Mar-18: N'iji nke eziokwu ahụ bụ na dịka ụnyaahụ, MinerOS Base, Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver", LTS ọzọ nke Ubuntu abanyela n'oge oyi, nke pụtara na ọ nweghị atụmatụ ọhụrụ ga-agbakwunye site na mwepụta ahụ na ọrụ ahụ ga-elekwasị anya na idozi chinchi ndị dị ugbu a na ime ka mmegharị nke ngwugwu dị iche iche dị iche iche, taa ejiri ya mee ihe oyiyi ọhụrụ nke MinerOS GNU / Linux Site na mmelite ohuru nke GNU / Linux MinerOS Base, ugbu a, anyị ga-ahụkwa n'ime ya ihe dịka: 4.15 Kernel, Xorg dị ka sava eserese, Wayland graphical server dị, GNOME 3.28 Desktọpụ, yana ụfọdụ nchịkọta dịka Nautilus file manager ka dị 3.26, Mozilla Firefox 57.0.4 na ihe nlele mbu nke LibreOffice 6.0.1.1. Na tupu Eprel, tupu ntọhapụ gọọmentị nke Ubuntu 18.04 na MinerOS 1.0, enwere m olileanya na m ga-enwe ike ịgbakwunye ma hapụ ọrụ Virtualbox 5.2 n'ime Distro ka na Live DVD / USB format ma ọ bụ mgbe arụnyere, ọ nwere ike ijikwa onyogho nke ISO n'onwe ya. otu ma ọ bụ Distros ndị ọzọ iji gbalịa.
Ọnye na -bụ Frank Silva dijo
Ọrụ pụrụ iche !!
Zaghachi Frank Silva
Maka ugbu a, mgbe ị wụnye MinerOS, ị ga-ehichapụ folda .anydesk (ndekọ) site na / ụlọ / $ USER na iwu: sudo rm -f /home/$USER/.anydesk mere ka AnyDesk (Nweta na Control Software Remote) na - agbanwe agbanwe ma nwee ike hazie ya site na ncha, ebe ọ bụ na uzọ ọzọ GNU / Linux MinerOS arụnyere ga-enwe otu aha njirimara na paswọọdụ. Na mbipute mbipute 1.0 a ga-edozi ya! Ma ugbu a naanị otu akụkọ bụ na LibreOffice anaghị agba ọsọ na usoro DVD / USB Live (Live) mana mgbe arụnyere Distro ọ na-arụ ọrụ zuru oke! Enwere m olile anya ịgbakwunye Kodi iji gbasaa ojiji nke Distro!
M na-agbazi: sudo rm -rf /home/$USER/.anydesk
MinerOS GNU / Linux 1.0: Emeela ya!
Ezigbo Ing Jose Albert, ọ dị mma ịnakwere ma kelee gị maka okike nke Distro a. Obi abụọ adịghị ya na nnukwu aka o nyere obodo. Ekele kwesịrị gị. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ụfọdụ: 1. Ebee ka enwere ike ibudata ya ozugbo enyere onyinye ị tụrụ aro ka emere? 2. Kedu mmemme Ngwuputa ọ gụnyere? 3. Ọ gụnyere Claymore’s Dual Miner? 4. have nwere Ntuziaka Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ? Ana m ekele gị nke ukwuu maka azịza gị. Biko degara m akwụkwọ, achọrọ m ịkwado gị na mmepe nke ọrụ a. Ndeewonu !!
Jụọkwa otu esi enweta nkwado MinerOS GNU / Linux 1.0 maka ndị ọkwọ ụgbọ ala nke motherboard dị iche iche na GPU iji mee ihe? Daalụ
1.- Mgbe onyinye nke 0,00010000 BTC maka Version 0.3 ma ọ bụ 0,00030000 BTC maka Version 1.0 M na-ezitere gị Google Driver Link na otu na email ị na-egosi! Eji m Eobot Wallets inata Onyinye!
2. - MinerOS GNU / Linux 1.0 ga-eweta mmemme onye na-egwuputa ihe Minergate, CGMiner, CPUMiner (Version: Multi na Opt), Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2) na XMR-STAK-CPU, gbakwunyere Ogwe aka, Bolivarcoin, Ọpụpụ, Jaxx, Magi, obere akpa Onixcoin na ngwa mgbakwunye Trezor Hardware Wallet plugin arụnyere na ndabara.
3.- Ee: Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2)
4. - have nwere nkuzi nkuzi vidiyo na akwụkwọ a: https://proyectotictac.wordpress.com/2018/03/07/mineros-gnu-linux-1-0-ya-esta-lista/
5.- Anọ m na ọrụ gị site na email a: albertccs1976@gmail.com
Jose Albert daalụ maka ịzaghachi. Ajuju ndi ozo? Kedu adreesị BTC gị? Kpọtụrụ gị site na mail maka onyinye? Enwere m ike ịwụnye Claymore's Dual Miner 11.2 na Distro gị, nke dịlarị? Nbudata njikọ ahụ bụ GOOGLE: https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU na MEGA: https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w
Daalụ. Banyere. Ekele m
Adreesị LTC: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE
Adreesị BCH: 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC
Ebe mkpado: 1286923
Adreesị ZEC: t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr
Nkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001286923
Adreesị MAID: 15easGdbFy4TuwvsmVDwNYZukxRskGodJN
Mgbe onyinye ahụ gasịrị, a ga-ezigara email na akaụntụ email "albertccs1976@gmail.com" na Aha ma ọ bụ Internet Alias, Mba na Ọnụ ego enyere, iji kwado nnyefe ma zipụ ozi email na njikọ njikọ dị iche iche.
EE. You nwere ike imelite na / ma ọ bụ tinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwanrọ ngwanrọ ọ bụla maka Linux na ọbụlagodi Windows ma ọ bụrụ na ị wụnye Playonlinux ma ọ bụ Wine!
Site n'ụzọ, oge ikpeazụ m gbakwunyere WPS Office Suite n'ụzọ zuru ezu na Spanish na ọ bụrụ na ọ mepee na ọnọdụ ndụ nke Distro iji kwụọ ụgwọ na LibreOffice adịghị! O nwekwara ụlọ ọrụ KODI Multimedia nke na-enye ohere njikwa nke ọdịnaya ọtụtụ mgbasa ozi na ntanetị ma ọ bụ ibudata yana ọbụlagodi egwuregwu egwuregwu vidio retro site na i emomi ROM ha.
Jose Albert ezigbo ehihie, enwere m obi abụọ ndị ọzọ:
MinerOS GNU / Linux 1.0 bụ kwalite na Ubuntu repositories ??
Kedu ka MinerOS GNU / Linux 1.0 si akwado ndị ọkwọ ụgbọ ala AMD na NVIDIA Motherboards na GPU dị iche iche eji arụ ọrụ?
Tụle na Ubuntu 18.04 LTS ga-ewepụta ya na Eprel 26 na nsụgharị ikpeazụ ya, enwere mmelite ọ bụla nke MinerOS GNU / Linux 1.0, mgbe nke a gasịrị? Ọ ka ga-abụ MinerOS GNU / Linux 1.0 ma ọ bụ nwee ụdị sub-version dị ka 1.1 ma ọ bụ ihe yiri ya?
MinerOS GNU / Linux 1.0 ga-apụ ụbọchị ole na ole mgbe ahapụchara Ubuntu 18.04, mgbe ahụ 1.1 na 1.2 nwere ike ịpụ.
Eeh. Jiri nchekwa Ubuntu na MX Linux 17 naanị ma ọ bụ ọnụ. Nkwado ahụ bụ otu ihe ahụ Ubuntu.
Maka ndị chọrọ inye onyinye na / ma ọ bụ nweta Distro, ndị a bụ obere akpa m maka onyinye:
16-Mar-18: Ruo ugbu a 7 arụnyere GNU / Linux 1.0 Mining Systems arụnyere na Desktọpụ na Mobile Computers dị iche iche na teknụzụ dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche (Institutions and Homes) maka naanị ọrụ nchịkwa ha (akpaaka ọrụ) yana inyocha arụmọrụ ha dị ka nzube zuru ezu Distro maka eslọ na iceslọ Ọrụ. E meela ihe niile afọ ojuju.
15-Mar-18: ISO ikpeazụ tinyere ntinye nke Petro Wallet.
14-Mar-18: Nchịkọta kachasị nke ISO na 4.5GB na nkezi oriri nke 0.4 GB nke nchekwa RAM na mbido na 13 GB nke Disk Space mgbe etinyere ya, yana karịa ngwa 3700 etinyeworị. Echiche nke nkọwa nke nsụgharị 1.1 na 1.2 na-amalite, nke a na-atụ anya ịgụnye mgbanwe ndị a:
a) Version 1.1: ISO dị elu karịa 4.7 GB nke mere na ọ ga-eme naanị site na DVD 8.4 GB Double Layer ma ọ bụ 8 GB USB Nchekwa Drive. Ọ ga-abịa na Playonlinux, Wine, na Steam etinyeworị. Ma eleghị anya, ole na ole ochie Game njikwa njikwa emulators. Ọ ga-akwado ntinye (dị mfe) nke nwaafọ Windows Ngwa, ọkachasị Egwuregwu.
b) 1.2dị 4.7: ISO dị elu karịa 8.4 GB n'ihi ya, ọ ga-eme naanị site na DVD 8 GB Double Layer ma ọ bụ 2016 GB USB Nchekwa. Ọ ga-abịa na MS Office XNUMX arụnyere. Maka uzo, nnabata na nkwụsi ike nke Windows na MS Office Users na GNU / Linux (MinerOS).
Mara: Ọ bụ ezie na MinerOS GNU / Linux 1.0 bụ 64Bit ije, nsụgharị 1.1 na 1.2 ga-abụ ọtụtụ ụlọ, ya bụ, 32 na 64 Bit. Maka uzo sara mbara nke ojiji ya!
13-Mar-18: Usoro nke iwepu ngwa ngwa (enweghị isi) na Distro malitere itinye ndị dị mkpa karị, na-enweghị ịbawanye ụba nke ISO (4.5GB) ugbu a. Nke a ekwela ka agbakwunye ihe ndị a: Firefox Alternative (Version 51.0.1) nke na-akwado ngwa mgbakwunye weebụ Java (JRE), nke arụnyere yana Sun Java JDK 9.0.4 zuru ezu. Ihe a niile ka Distro dị njikere maka igbu nke mmemme mpaghara na ntanetị yana ngwa ndị emere na Java dịka Retro Console Emulated Games. E tinyewo ndepụta sara mbara nke njikọ (URL / Links) na webapps (Nhọrọ Nchọgharị Ibe Nchọgharị Ntanetị) na Emulators, ROM, na Egwuregwu Online na Retro Consoles na-ebudata saịtị.
10-Mar-18: wepụrụ omenala 5th Conky (Desktọpụ Monitor) gbakwunyere ma melite 1st Conky gbakwunyere na otu ozi na ndị ọzọ. Ebe 5th Conky na-enye nsogbu ngosi eserese mgbe ị na-amalite na mkpebi dị ala.
08-Mar-18: WPS Office gụnyere dị ka mgbakwunye Office Suite, kpam kpam na Spanish, yana akwụkwọ ọkọwa okwu ya na Spanish na mkpụrụedemede niile nke obodo, na LibreOffice ka emelitere na nsụgharị 6.0.2.1 na Mozilla Firefox mbipute 58.0.2, na-eme ka ihe oyiyi ISO nke Distro gaa na 4.5GB.
07-Mar-18: Site taa, naanị nkuzi vidiyo ọhụrụ ka a ga-eme etu MinerOS GNU / Linux 1.0 si, wụnye ma rụọ ọrụ, ka ha wee mara Distro n'ozuzu ya. Ruo mgbe a tọhapụrụ Ubuntu 18.04, yana mmelite MX Linux 17 kachasị ọhụrụ, mepụta nsụgharị ikpeazụ na nke doro anya na ihe oyiyi ISO nke MinerOS GNU / Linux 1.0, nke a ga-enye ndị nyere onyinye kpamkpam onyinye 10.000 satoshis ( 0.00010000 BTC) nke mbipute 0.3 na site na ịkwụ ụgwọ onyinye nke 30.000 satoshis (0.00030000 BTC) maka ndị nyere onyinye ọhụrụ.
06-Mar-18: Kodi (Multimedia Center / Media Center) gbakwunyere na Distro MinerOS GNU / Linux 1.0. Nwere ike ịbanye na Multimedia Center ma ọ bụ site na XFCE na Plasma Desktop Environ, iji jikwaa Multimedia Resources (Ihe nkiri, vidiyo, egwu, ụda, ihe oyiyi na ọdịnaya ndị ọzọ na ntanetị ma ọ bụ ebudata). Gụnyere ohere nke Retro Console egwuregwu (Atari, SEGA, DreamCast, n'etiti ndị ọzọ). Ọ biaworị na Repositories nke Intrcomp.net, SRP.nu, Fusion.tvaddons.co, Gamestarter na Zach Morris. Na Internet Archive ROM Launcher add-ons (plugins) n'etiti ndị ọzọ. Nke ga - eto eto iji bulie ojiji nke Kodi Multimedia Center.
Ezigbo mma, enwere m ụdị ndụ nke kwuru distro iji nwalee ya; mana amaghị m ihe kpatara m kwesiri iji tinye paswọọdụ nnweta, enweghịkwa m ozi ahụ dị nso ịbanye. Ọ ga-amasị m ịmara ma ọ bụrụ na nke a na-abịa dị ka nke a na ndabara, ma ọ bụ na ọ bụ n'ihi na ejiri ihe ngosi diski diski arụ ọrụ site na ụdị arụnyere na enweghị m ndụmọdụ banyere okwuntughe.
Zaghachi Miguel Matos
Morningtụtụ ọma Jose, ana m ekele gị na blọọgụ gị, kedụ ụdị akụrụngwa akwadoro ma ọ bụ baa uru m?
Zaghachi Francisco Esposito
Maka ugbu a, ndị na-egwupụta ihe na ndị na-egwupụta ihe njikwa nke arụnyere nwere ike ịbụ nke CPU mfe, ma mgbe ha wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị eserese ọ bụla, ha ga-enwe ike ịnweta m n'enweghị nsogbu site na GPU.
Versiondị 0.2 - 0.3 - 1.0: Onye ọrụ: sysadmin / Paswọdu: Sysadmin * 2018 *
Magburu onwe ya, ndị dị ka Gị, na-anụ ọkụ n'obi na nkwenye siri ike na enwere ike ịme ihe na mpaghara. Ekelere m gị. Aga m etinye ya ma dee gị ihe banyere ya.
Zaghachi Carlos Escobar
Daalụ maka okwu gị ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na mpaghara iji dozie iji ohere (nsogbu) eme ihe.
Taa ị nwere ike ibudata nsụgharị Beta 0.2, 0.3 na RC1 nke Version 1.0 n'efu. Na tupu onyinye version 1.0 ikpeazụ anụ.
Ndewo ezigbo, Achọrọ m ịnwale gị distro ka m na otu nanị otu maka ya. Mana enwere m ajụjụ ụfọdụ, ị nwere ike zitere m email ka m gwa gị?
Email m bụ kleisinger.lucio@gmail.com
ọrụ gị yiri ihe na-atọ ụtọ
daalụ n'ọdịnihu, ekele si Argentina
You ma na MintMe Ngwuputa nyiwe dakọtara na Linux? Ya mere karịsịa mgbe ndozi na wepụtara ya kacha ọhụrụ version 1.2. Lee m hapuru njikọ gị ka inyocha mmelite niile emere https://www.mintme.com/news/release-notes-v1-2
Zaghachi Johan Linares
Kedụ ka "Blockchain" ga - esi mee ka anyị nwekwuo onwe anyị?
Ebee ka UNIX si bia?